रु. १४ लाखमै बनाउन सकिन्छ ४ कोठे घर (भिडियोसहित)
घर बनाउने कम्पनीको सम्पूर्ण जानकारी सम्पर्क फोन नम्बरसहित !
मीरा खतिवडा – के तपाईंलाई हेर्दै चिटिक्क घर चाहनुहुन्छ? यस्तो घर एकाध महिनामै तयार होस् भन्ने इच्छा छ?
कसरी बनाइन्छ यी घर ? – कोरियन प्रविधिको एसवाइ प्यानल प्रयोग गरेर घर बनाउन जग भने परम्परागत तरिकाले नै उठाइन्छ। पक्की घर बनाउन जसरी जग खनेर उठाइन्छ, यसमा पनि त्यस्तै चाहिन्छ। तर पक्की घर बनाउँदाभन्दा कम जग खने पुग्ने इञ्जिनियर कोइराला बताउँछन्।
कति पर्छ यस्तो घर बनाउन? – यस्तो घर बनाउँदा प्रति वर्गफिटका आधारमा खर्च लाग्छ। भित्ताका भाग बनाउँदा २५ सय रूपैयाँ प्रति वर्गफिट लाग्छ भने छत बनाउन १६ देखि १८ सय रूपैयाँमा हुने कोइरालाले जानकारी दिए।
कति समयमा बन्छ? इञ्जिनियर कोइरालाका अनुसार चार कोठाको एक तले घर बनाउन एक महिना समय लाग्छ। त्यस्तै, अलि धेरै डिजाइनको घर बनाउन भने साढे दुई महिनासम्म लाग्छ।
काठमाडौं महानगरले तोक्यो जग्गाको नयाँ मूल्य, कहाँको कति ? (सूचीसहित)
जग्गासम्बन्धि लागु भयो नयाँ प्रणाली – घरमै बसेर जग्गाको नक्शा प्रिन्ट गर्न सकिने, सबै काम अनलाइनबाटै
घडेरी किन्दै हुनुहुन्छ ? सक्कली जग्गा र जग्गाधनी यसरी चिनौं
घरजग्गा बैनाको तमसुक लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण २१ बुँदा, ‘लिखितम धनीका नाम देखि इतिसम्बत सम्म’ यो हेर्नुहोस्
थोरै पैसामा काठमाडौँमा घडेरी किन्न चाहानुहुन्छ ? यी स्थानमा पाइन्छ कम मूल्यमा जग्गा हेर्नुस्..